“Cristiano Ronaldo wuxuu door biday loolan cuub, wax walwal ahna kama qabo Diego Godín”…. Diego Simeone – Gool FM
(Atletico) 25 Luulyo 2018. Macalinka kooxda Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa sheegay in go’aanka uu kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ugu dhaqaaqay Juventus uu yahay mid qaadashadiisu ay adag tahay.
Cristiano Ronaldo ayaa go’aansaday inuu ku biiro kooxda reer Talyaani ee Juventus, kadib mudo dhan 9 sano uu kusoo qaatay kooxda Real Madrid.
Diego Simeone oo haatan isaga iyo kooxdiisa Atletico Madrid ku sugan Singapore ayaa wuxuu kaoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay kula ciyaari doonaan kooxda Arsenal koobka International Cup of Champions.
Simeone ayaa wax laga weydiiyay fikirkiisa kaga aadan go’aankii uu Cristiano Ronaldo ugu dhaqaaqay kooxda Juventus iyo in Diego Godín lala xiriiriyo isla kooxda reer Talyaani.
“Way adag tahay in lagu qamaaro loolan cusub waa xaalad aad u adag”.
“Layaab iguma ahan in Diego Godín lala xiriiriyo mid ka mid ah kooxaha ugu fiican kubada cagta sida Juventus, waana wax iska caadi ah”.
Cristiano Ronaldo oo ka careysiiyay macalinka kooxda Manchester United José Mourinho